Date My Pet » Soso-kevitra ho tonga Chick andriamby
Inona no mahasarika ny vehivavy ny nofy? Na dia afaka maka ny ankamaroan'ny ela ry zalahy feno fitsapana sy hadisoana ny, efa nanangona ny lisitry ny toro-hevitra mba hahafahanao ho lasa zana-borona, ary hahita ny andriamby ho vadiny.
Soso-kevitra #1: Fandavana tsy marina foana fandavana
Aoka hatao hoe hihaona vehivavy tsara tarehy, -dresaka dia hahita izy manana sipa. Raha ry zalahy indrindra ho entinao ho famantarana niverin-dalana sy handao, ianao raha ny marina tsy tokony. Tsy mariky ny fandavana na dia iray amantarana izany fa tsy liana. Raha ny resaka hampandeha tsara amin'ny Ihomehezany nikoriana sy ny tsiky, handinika ireo ho toy ny famantarana. Nisy lehilahy iray izay tena voafehiny ny fahaiza-hisarihana ny vehivavy no tena ary fantany tsara ny vehivavy rehefa mahita azy. Satria tamin 'izy amin'izao fotoana izao dia tsy midika fa ianareo dia tsy manana fahafahana. Izany no fahafahana ho any ho azy. Ny sasany amin'ireo tsara indrindra ny fifandraisana sy ny fanambadiana manomboka amin'ny alalan'ny finamanana.
Soso-kevitra #2: Miavaha
Mitsangana avy amin'ny vahoaka dia tena ilaina eo amin'ny fiarahana sehatra. Misy ry zalahy hoe maro toy izany koa, ary toy izany koa ny filalaovana fitia ianao. Koa ahoana no mijoro avy? Tonga manerana toy ny matoky, tsy cocky. Aoka ianao ho tena, izahao izay mahaliana azy sy ny fialam-boly fa samy anjara. Ary farany, ho irery ianao. Raha alaina ho, satria dia misarika ny vehivavy tsara.
Soso-kevitra #3: Manaova Connection
Nanaiky ny zava-drehetra izay tonga avy amin'ny vavan'ny vehivavy sy nanaiky azy rehetra ny fomba fijeriny sy ny safidy dia tsy ny fomba handresy ny vehivavy. Vehivavy tsy mitady olona izay mifanaraka amin'ny zava-drehetra, hoy izy. Dia toy ny zava-tsarotra. Miady hevitra fomba fijery samy hafa, hevitra, mahaliana, sy ny firehetam-po dia manampy ny hanorina fifandraisana lalina kokoa. Vehivavy mitady ny marina momba ny lehilahy.
Soso-kevitra #4: Strength
Vehivavy miezaka ho vady izay matanjaka sy manana toerana ambonimbony kokoa na-pihetseham-po sy ara-tsaina. Raha ry zalahy sasany mahatsapa ho toy ny tsy mahasarika ny vehivavy, satria tsy manam-bola, asa lehibe, sosialy ambony, izay tsy marina. Vehivavy nahasarika ny olona amin'ny toetra amam-panahy mafy orina kokoa, ary iza no mahalala izay tiany. Fa tsy misconstrue hery izany. Fa ny lehilahy izay mihazona ny tena hery dia tsy matahotra ny haneho ny saro-pady sy ny lafiny tantaram-pitiavana.
Soso-kevitra #5: Manakatona ny Deal
Maro ny olona ho latsaka ao amin'ny namana faritra rehefa tsy mahay hanidy ny fifanarahana. Raha tsy misy ny fifanarahana famehezana, Tsy ho ela dia ho fantatra ho toy ny lehilahy be fitiavana sy ny fitiavana ny namana, ary indrisy sata izany dia ho sarotra ny manala ny. Ry zalahy dia afaka mahazo fantarina lafiny sy hanadino ny fahafahana tanteraka ho azy ireo fotsiny ny vehivavy, satria tsy fantany izay tokony hatao. Ny hoe tia ady kely miaraka amin'ny zeroing ao amin'ny famantarana ny vehivavy manan-danja mandefa dia hanampy ny hanidy ny fifanarahana.
Amin'ny alalan'ny fifehezana ireo toro-hevitra etsy ambony, Azo antoka fa ianao ho eo amin'ny fomba manintona ny vehivavy ny nofy.